Yeyiphi indawo ethathwa njengeyona intle ngokukhangela umsebenzi eMoscow? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Yeyiphi indawo ethathwa njengeyona nto iphambili ukukhangela umsebenzi eMoscow?
Ezona ndawo zintle zezi: Qu; Headhunterquot; neS Superjob.ru-yonke enye into ifana kabi!
Indawo efanelekileyo yokukhangela umsebenzi eMoscow ngokwemvelo yintloko, ukuthumela ulwazi lomsebenzi kubiza kakhulu kunakwamanye amaziko, kuphela ngabaqeshi abathembekileyo nabathembileyo abanokunikezela ngemivuzo elungileyo baqokelelwa apho.
Kwindawo yesibini yiSuperjob, apho unokufumana umsebenzi olungileyo, kodwa zininzi izikrelems ezinokuphosa ngomvuzo, ulumke xa ukhangela umsebenzi kulo vimba, qiniseka ukuba ufunda uphononongo kwiwebhusayithi yeBlackjob, babhala uphononongo malunga nomqeshi.
Indawo yesithathu yiSayithi Work.ru, apha ikakhulu izithuba zomsebenzi malunga nokusebenza ngokomzimba, iifektri, ukuvelisa, iifektri, ukwakhiwa kubekwa, ukuba ufuna umsebenzi kule ndawo, eli iya kuba lelona qonga liphezulu, ukuba ufuna umsebenzi njengenkokeli okanye umphathi, ke kungcono I-headhunter iyakwenza.
Ndikunika indawo yokukhangela umsebenzi eMoscow - www.ejob - mo.ru, okwangoku imele malunga nezithuba ezingama-65535. Kodwa xa ujonga umsebenzi akuncedi ukuba ukhokelwe sisiza esinye, kufuneka ubukele uninzi kwaye ufunde uhlaziyo malunga nabo.
Zininzi iindawo zokukhangela umsebenzi eMoscow, kodwa kubonakala ngathi yeyona ndawo intle Umkhathaleli. Ukukhangela okugqwesileyo kunye nokuchwephesha kushishino nohlobo, apho unokufumana khona into oyifunayo.
Kule portal yokukhangela umsebenzi uza kubona kwaye uqhelane nezona zithuba zibalulekileyo nezona zichanekileyo eMoscow. Kwaye ngaphambi kokubhengezwa kwesithuba apho, iya kuqala ihlolwe kwaye kuphela izibhengezo eziqinisekisiweyo ezinikezelwa ngabaqeshi abathembekileyo zibekwe apho.
Kwaye apho unokufumana indawo yokusebenza yokwenyani, kwaye ngaphandle koko, unokuthumela umyalezo kwisithuba osithandayo .. Jonga kwaye uya kuyibona.
Kukho iwebhusayithi efanelekileyo yokwenza imali; nantsi ikhonkco kule webhusayithi (https: //youdo.com/) kule webhusayithi unokufumana imali ngokulula xa ujikeleza isixeko kwaye uhlangana nabantu abatsha. Ngokwam, sele ndizuze i-ruble engama-20 amawaka apho kwiiveki ezi-2.
Ndicinga ukuba yenye yezona ndawo zintle zokukhangela umsebenzi eMoscow iya kuba yindawo enikezelwe ukukhangela imisebenzi ngokubanzi, kubandakanya eMoscow http://msk.superjob.ru/ kuye akukho zihlolo ezilungileyo kwi-Intanethi. Nanku umsebenzi omncinci ofanelekileyo kubahlali unemvume yokuhlala.
Ukufumana umsebenzi olungileyo, kufuneka udlule kwindawo engaphezulu kwesinye. Ndicebisa ukuba ndijonge izithuba ezivela kwiZiko leNgqesho eMoscow apha okanye apha apha (IYandex ibonelela ngale nkonzo). Indawo elungileyo iyaqwalaselwa msk.superjob.ru.
Ndincoma ukusebenzisa indawo.yandeks.ru indawo yokukhangela umsebenzi. Le ndawo ngumhlanganisi weendawo ezininzi ezilungileyo ezibonelela ngemisebenzi, umzekelo, iqulethe zonke iintengiso zomsebenzi.ru, hh.ru kunye nezinye izixhobo.
Indawo efanelekileyo yokufumana umsebenzi eMoscow ithathwa njengele ndawo http://msk.superjob.ru/. Indawo ineenkcukacha ezinkulu zezithuba. Inkqubo yokusebenza kakuhle yokukhangela kuzo zombini izithuba kunye neenkampani. Uncedo lubonelelwa ngokuqulunqa kunye nokupapasha i-resume efanelekileyo.
Mna ke, indawo ebaluleke kakhulu yokukhangela umsebenzi eMoscow rabota.ru
Kwinyanga ephelileyo, bendikhangela intombi yam kwenye indawo, ndafumana umsebenzi owavela xa nditsalela umnxeba, bathi bawfumana kakuhle, kwaye bengazi ukuba intengiso isemi kwaye oku kwiziza ezininzi .. Kodwa kwisiza ndibize umsebenzi wokuqala endawufumanayo kwaye yonke into yayilungile ..
Ngoku zininzi iindawo zokukhangela umsebenzi eMoscow nakulo lonke elaseRussia. Kodwa ndiyazi ezona ndawo zithandwa kakhulu, kwaye nam ndikhangele umsebenzi kuzo, kwaye ndaphumelela, ezinje nge-superjob.ru (Umsebenzi kufanele ukuba ube mnandi!) Nalu ikhonkco kuyo - Imisebenzi, izithuba zomsebenzi, ukukhangelwa komsebenzi - Superjob.ru
Kukho indawo enjalo - hh.ru (Uncedo ekufumaneni umsebenzi), nantsi ikhonkco kuyo - Iphepha; -Umsebenzi we-Runet kunye nezithuba zomsebenzi
Ndizithathela ingqalelo ezi ndawo zokukhangela umsebenzi njengezona ziphumelele nezona zibalaseleyo. Ukusuka kule ndawo, abaqeshi bakubiza ngenene. Ngethamsanqa kuphando lwakho.
Uninzi lwabantu abafuna umsebenzi eMoscow bacinga ukuba le ndawo yeyona ndawo ilungileyo yokukhangela. http://msk.superjob.ru/. Kukho ezinye izinto ezinokwenzeka, umzekelo, iisayithi rabota.ru, umsebenzi.ru, zarplata.ru, rdw.ru, headhunter.ru, iwebhusayithi yephephandaba quot; Ukusuka kwisandla ukuya kwesinye.
Ndincoma indawo - yentengiso-job.ru
Bangaphezu kwamawaka amathathu abatyeleli ngosuku. Izithuba ezininzi.
Ndicebisa indawo elungileyo yokukhangela umsebenzi kunye nomsebenzi wesingxungxo http://profimir.com
Ndingaphonsa izixhumanisi ezimbalwa, kodwa akunangqondo, iisayithi azikho; Isakhiwo esikhulu namhlanje ikhona, kwaye ngomso ayikho, jonga ukubakho (kukho iindawo zokubala ezisezantsi kweendawo), kwaye ujonge ugxeko ncomo ngezi ndawo, kunye nophononongo kubasebenzisi esele ubhalisile.
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,451.